Kutheni Taili Kids - Ningbo Taili Bonus Rhweba ngaphakathi no Rhweba Co., Ltd
ISIZATHU TAILI KIDS
8 izizathu elula kutheni kufuneka ukhethe Taili Kids.
Elithile TEAM OF DESIGNERS
inkampani yethu yasekwa ngo-1994; ukususela ngoko siye phambili ngokukhawuleza iqela ezingaphezu kwama-20 abayili ezinesiphiwo abenza umsebenzi ekudaleni iimveliso isebenziseka lula, soqalo abathengi uthando.
UKHUSELEKO YEYONA NTO IPHAMBILI
Ebonisa zokungena kuyo yonke inkqubo yokuvelisa, kunye neempawu zokhuseleko ezifana izakhelo ngokuthe namabhanti okhuseleko indawo-5 kwi strollers zethu umntwana, zonke iimveliso Taili Kwathi iimvavanyo engqongqo, efana iimvavanyo ukhuseleko kwimveliso EN kunye SGS, ukuhlangabezana migangatho iphezulu kweli shishini.
iimveliso zethu zenziwe amalaphu obutofotofo ukuba isandla olukhethwe ukusuka kubenzi best eyolukiweyo. Athambe ukuya ngaphandle kwebala, kodwa ixesha elide ngokwaneleyo ukuze bahambe umgama.
Thina kwizinga-isiqinisekiso leengcaphephe ukuqinisekisa imigangatho yethu ofuna ziyafikelelwa kwaye zagqitha ngexesha yonke inkqubo woveliso.
Ukusebenza eliphezulu ngamaxabiso afikelelekayo
Nandipha umgangatho ukulindeleyo ngumenzi uthembeke, ngamaxabiso abangakwaziyo beat.
SERVICE LOMXUMI ENKULU
Sikwenza ishishini lethu ukuba uchatha kubathengi bethu. Nje jonga kwi nto abanye abantu bathi kwiphepha Facebook, ncomo zethu blog kunye Google.
Kulula ukuqhuba STROLLERS
Zonke strollers zethu kudityaniswe yindlela elula-lunemiba eyenza ukuvula nokuvala kubo cinch (inomsebenzisi abazali lixakekile abathanda).
izakhelo zethu eyenziwe aluminium ezilula zokunciphisa isambuku kunye ubunzima strollers yethu, yenze lula ulisonge, plus kulula ukugcina isegumbini lakho, isiqu imoto yakho, kwaye elula bokusetyenziswa ngexesha uthatha zokuhamba yoluntu.